चितवनमा सुनसान शिवालय,चेलीबेटीले घरमै मनाए तीज - Narayanionline.com
चितवनमा सुनसान शिवालय,चेलीबेटीले घरमै मनाए तीज
भगवान शिवको पूजा तथा व्रत गरेर मनाईने तीजको दिन बिहानैदेखि यहाँका शिवालयहरु सुसान रहेका छन् । कोरोना भाईरस (कोभिड १९) का कारण जिल्लामा जारी निषेज्ञाज्ञाका कारण शिवालयहरु सुनसान भएका हुन् ।
विगतका वर्षहरुमा तीजको दिन देवघाट, नारायणगढ, भरतपुर लगायतका स्थानमा रहेका शिवालयहरुमा बिहानैदेखि भक्तजनहरुको भिड लाग्ने गर्दथ्यो । देवघाटस्थित नारायणी र कालीगण्डकी नदीको संगमस्थलमा स्नान गरी शिव मन्दिरहरुमा पूजा गर्नेहरुको ठूलै भिड हुने भए पनि आज भने सुसान जस्तै देखिन्छ ।
देवघाट क्षेत्र विकास समितिका सदस्य नवराज ढकाल तीजको दिन बिहानैदेखि देवघाट सुनसान रहेको बताउँनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो “स्थानीय केही भक्तजन स्नानका लागि गए पनि बाहिरबाट आउनु भएको छैन ।” उहाँका अनुसार देवघाटमा रहेका बृद्धबृद्धाहरुलाई कोरोनाको बढी जोखिम हुने भएकाले भक्तजनहरुलाई नआउन आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को बढ्दो संक्रमणले गर्दा झन्डैझन्डै पूरै जिल्ला लकडाउनको अवस्थामा छ । जिल्लामा संक्रमितको संख्या ३०३ पुगिसकेको छ । जसका कारण जिल्लाका ७ मध्ये ६ पालिकामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । भरतपुर महानगरमा समेत कडा निषेधाज्ञा छ । अत्यावश्यक कामबाहेक मानिसहरू बाहिर निस्कन पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा आज हिन्दू नारीहरूले तीज पर्व मनाउँदै छन् ।
शिवालयहरुमा मात्रै होइन, बजार क्षेत्रका सडक पनि सुनसान छन् । रातो सारीमा सजिएर सडकमा हिड्नेहरु भेटिंदैनन् । माइती, आफन्त, साथीसंगी सबैसँग भेटघाट बन्द छ । सामान्य अवस्थामा व्रतबसी बिहानैदेखि शिवालयहरूमा पुग्ने व्रतालुहरू यसपटक घरमै बसेका छन् ।
यस वर्ष सबैले घरमै बसेर तीज मनाइरहेका छन् । तीजका दिन विगत वर्षहरुमा हुने तीज गीत प्रतियोगिताहरु यस वर्ष रोकिएका छन् । यसपटकको तीजमा व्रतालुहरूले मन्दिरमा पूजा गर्न गएका छैनन् । चितवनका सबै पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुले तीजको शुभकामना सन्देश दिँदै घरमै सुरक्षित साथ तीज पर्व मनाउन अपिल गर्नुभएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिका वडा नंं ११ की चन्द्रामाया पाण्डे यसबर्ष नजिकै रहेको माइतमा समेत जान पाउनु भएन । उहाँको घरदेखि माइतको दुरी करिब १० किलोमिटर मात्रै छ । तर कोरोना (कोभिड १९) को जोखिम र निशेधाज्ञाका कारण जान नपाएको उहाँले बताउनुभयो । “यसबर्ष जान पाईएन भनेर खासै गुनासो छैन्, उहाँले भन्नुभयो, सबैभन्दा ठूलो कुरा स्वास्थ्य हो, बाँचियो भने अर्को बर्ष रमइलो गरौंला ।” उहाँले सबैले आ–आफ्नो घरमा तीज मनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
रत्ननगर नगरपालिका वडा नंं ६ की सिता पौडले यसबर्षको तीज खल्लो भएको बताउनुहुन्छ । बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था छैन । घरमै मनाउनुको विकल्प छैन । घरमै पूजा गरेर तीजको वर्त बसेको उहाँले बताउनुभयो । ज्यान जोखिममा राखेर पर्व मनाउन नहुने उहाँको धारणा छ ।
भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १२ की सीतादेवी पौडेल विगतमा बिहानै देवघाट पुगेर स्नान तथा पूजा गर्ने भए पनि यस वर्ष घरमै यो कर्म गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो “सबैभन्दा ठूलो कुरा स्वास्थ्य हो, स्वस्थ रहन सकियो भने पूजा अर्काे वर्ष पनि गर्न सकिन्छ ।” नजिकै रहेको माइती पनि आफू नगएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो “आफू बैंकमा काम गर्ने भएकाले कोरोनाको उच्च जोखिममा छु, कतै आफैलाई त संक्रमण छैन भन्ने सोचेर आमा बाबुलाई भेट्न माईती गईन् ।”
भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १० मा रहेको महाकालेश्वर शिव मन्दिरका उपाध्यक्ष बामदेब शर्माले यसबर्ष दर्शनका लागि मन्दिर नखोलिएको बताउनुभयो । “मन्दिर परिसर सुनासान छ, उहाँले भन्नुभयो, मन्दिरमा ताला लगाएजस्तै भएको छ ।” उहाँले चाडपर्व छ भन्दैमा सरकारको नियम उलंघन गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । भरतपुरमा निशेधाज्ञा भएका कारण पनि मन्दिर नखोलिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराइले तीजमा माइत जान, शिवालयमा जान र भीडभाड गरेर दर खान रोक लगाइएको बताउनुभयो । उहाँले चितवनमा कडाइका साथ निशेधाज्ञा जारी गरिएको बताउनुभयो । सबैको साथले कोरोना पराजित गर्न सकिने भन्दै चाडबाडका नाममा भिडभाड गर्न नहुने बताउनुभयो ।
हरितालिका तीज, विवाहित महिलाहरु पतिको सुस्वास्थ्य र प्रगतिको कामना गर्दै तथा अविवाहित महिला सुयोग्य पति पाउँ भनेर भगवान शिवको पूजाआराधना गर्दै व्रत बस्ने परम्परा छ । हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले बाल्यकालदेखि श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी मनमनै कामना गरिरहेको भए पनि पिता हिमालयले भगवान् विष्णुलाई कन्यादान दिन तयारी गरेका थिए । हिमालयको योजना थाहा पाएपछि सखीहरूले पार्वतीलाई हरेर लुकाएर राखेको थिए । पार्वतीले त्यही लुकाएर राखिएको ठाउँमा श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी निर्जला व्रत बसेको हुनाले यसलाई हरितालिका व्रत भन्ने गरिएको हो ।
भाद्र शुक्ल द्वितीयाका दिन राती दर खाई तृतीयाका दिनदेखि सुरु हुने तीज पर्व पञ्चमीको दिन अरुन्धतीसहित सप्तऋषिको पूजा गरेपछि सम्पन्न हुन्छ ।
‘लकडाउन’को मौका छोपेर देशभरका २०० स्थानमा सडक र पुल निर्माण धमाधम
बेपत्ता फेलापरेसंगै बागलुङ जीप दुर्घटनामा मृतकको सङ्ख्या १५ पुग्यो
सर्वपक्षिय बैठकको निर्णयः अनशन तोड्न वडाध्यक्ष पौडेललाई आग्रह, सर्वपक्षिय डेलिगेसन जाने
आँचल र उदिपको सम्बन्धको एक वर्ष